ကျွန်တော်သိသော Blockchain ( Henry Aung ) — Steemkr
ကျွန်တော်သိသော Blockchain ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ ယမန်နေ့က blockchain နည်းပညာနှင့်ပါတ်သက်၍ ဘဏ်တို့၏ cryptocurrency တို့အပေါ် လက်ဦးမှု ရရှိစေရန် လုပ်ဆောင်လာမှုအပေါ် အကြမ်းဖျင်း ဖေါ်ပြပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်ဆိုရလျင် ကျွန်တော့ အနေဖြင့် နည်းပညာများ နှင့် အလှမ်း ဝေးလွန်းလှပါသည်။
တက္ကသိုလ် တက်ပြီးသည်နှင့် စင်္ကပူ မထွက်ခွာမှီ computer ခေတ်စားနေသောကြောင့် computer သင်တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့ရသော်လည်း တကယ်တမ်း Computer ကို အသုံးချ၍ အလုပ်လုပ်ရသည်မှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ရောက်မှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို အချိန်ကတော့ Computer အား တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြု နိုင်ရန်အသာထား email မည်သို့ ပို့ရ မည်ကစပြီး ပြန်သင်ယူခဲ့ရပါသည်။
ထို့ နောက် စင်္ကပူ တွင် အချိန်ပိုင်း ပညာသင်ယူခဲ့သော ကာလများတွင်တော့ computer မသုံးတတ်၍ မရတော့ပါ။ အရာရာ computer နှင့် စ၍ computer နှင့် ဆုံးရသည်ချည်း ဖြစ်ပါသည်။ steemit နှင့် မတွေ့ခင်ကအထိ တော့ computer ဟူ၍ အခြားသူငှာ များ ရေးထားသော software များ မည်သို့မည်ပုံ အသုံးပြုရမည် ၊ Internet, Yahoo , Google စသည်တို့တွင် မွေနှောက်ရှာဖွေ ဤ အဆင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၆ steemit နှင့် တွေ့ပြီး သည့် နှောက်မှ blockchain အကြောင်းကို သိရှိလာရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၈ ကျော် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ရောက်သောအခါ blockchain ကို အတွင်းကျကျ သိချင်သော အနေအထားသို့ ရောက်ရှိလာပါတော့သည်။ ကျွန်တော်၏ ညဉ်အတိုင်း တခုခုအား သိချင်လာပြီ ဆိုလျင် မရိုးမယွ ဖြစ်လာပါတော့သည်။
Internet တွင် Youtube ဗီဒီယို ဖိုင်ပေါင်းများစွာ ဖွင့်ကြည့်သည့်တိုင်အောင် blockchain အကြောင်းအား တိခေါက်မိသည့် အဆင့်သို့တိုင် မရောက်ခဲ့ပါ။ စင်္ကပူရှိ တက္ကသိုလ် များတွင်လည်း အချိန်ပိုင်း ဖြင့် blockchain နည်းပညာ သင်ယူနိုင်သော်လည်း အဖိုးအခ မှာ ၅ ရက်တပါတ် သင်တန်းအား မြန်မာငွေ သိန်း ၅၀ ခန့်ကုန်ကျမည် ဖြစ်သဖြင့် မိမိအတွက် လက်လှမ်း မမှီသေးပါ။
ဤ အခြေအနေတွင် လွန်ခဲ့သောလ အနည်းငယ်က မိမိတို့ ကုမ္ပဏီမှ Rahul ဟူသော IT engineer တယောက် အလုပ်ခန့်ခဲ့ပါသည်။ Rahul မှာ ကုမ္ပဏီ ၏ website နှင့်ပါတ်သက်၍ အလုပ်လုပ်ပေးရသူ ဖြစ်သော်လည်း အချိန်ရသည်နှင့် ကျွန်တော့ထံသို့ ရောက်လာလေ့ရှိပါသည်။
အကြောင်းမှာ သူအလုပ်လုပ်ရသော နေရာမှာ HR department နှင့် Account department ကြားတွင် ဖြစ်သဖြင့် အမျိုးသမီးများသာ ရှိသော နေရာဖြစ်ပါသည်။ သူ့ အတွက် စကား ပြောဖေါ်မရှိ။ ထို့ အပြင် သူ့ အနေဖြင့် ပန်ချာပီ ဖြစ်သောကြောင့် စင်္ကပူအမျိုး သမီးတို့ကလည်း အလိုက်အထိုက်သာ ဆက်ဆံကြသဖြင့် သူ့အနေဖြင့် အချိန်ရတိုင်း ကျွန်တော့ဆီ ရောက်လာလေ့ရှိပါသည်။
Rahul ဤ ကုမ္ပဏီသို့ ရောက်လာသည်မှာ ကျွန်တော့ အတွက်တော့ အချိုရှာ ဆေးသကြားနှင့် တွေ့ ဟူသကဲ့သို့သာ။ ကျွန်တော် သိချင်သော blockchain အကြောင်း မေးလိုက်သော အခါ Rahul က blockchain ကိုသိကြောင်း ပြန်ပြောပါသည်။ သို့ သော် သူစိတ်မဝင်စားပါ။ သူစိတ်ဝင်စားသည်က Web developer နှင့် Cyber security ။
ကျွန်တော် Blockchain အားသင်ချင်သည်ဟု ပြောသောအခါ သူသင်ပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ပျော်လိုက်သည် ဖြစ်ခြင်း ။ သို့ သော် Blockchain မဟုတ် အခြေခံ computer programming အကြောင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အထက်တွင် ဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း ကျွန်တော့ အနေဖြင့် နည်းပညာများ နှင့် အလှမ်းဝေးလွန်ရကာ Computer programmer ဟူ၍သာ ကြားဘူးပါသည်။ ဘာလုပ်ကြသည်မှန်း မသိပါ။
Rahul က ကျွန်တော့အား C program basic tutorial ဟူသော လက် ၃ လုံးခန့်ထူသည့် စာအုပ်ပေးဖတ်ပါသည်။ ဖတ်ကြည့်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားသော်လည်း တလုံးမျှ နားမလည်။ Rahul ပြောပြသည်မှာ အခြေခံ basic computer programming တတ်မှ မိမိလေ့လာလိုသော Java Script, blockchain သို့ မဟုတ် python စသည်တို့အား တဆင့်တက်၍ လေ့လာ နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဤ နည်းပညာတို့မှာ အလွန်ကျယ်ပြန့်ပါသည်။ Software ရေးသူလုပ်မည်လာ ? ။ Web Developers လုပ်မည်လား ? ထိုနေ့ မှ စပြီး C programme ကို စကိုင်ကြပါသည်။ ထို့နောက် C++ ကို သွားကြမည်ဟု ဆိုပါသည်။ အမှန်ဆိုရလျင် နည်းပညာနှင့် ပါတ်သက်ပြီး သင်ဆရာ သည်မည်မျှ လောက် အရေးကြီးသည်ကို လက်တွေ့သိမြင်လာရပါသည်။
ကျွန်တော့အနေဖြင့် Blockchain နည်းပညာအထိ ရောက်ရန် အလွန်ကို အလှမ်းကွာဝေးပါသေးသည်။ မြစ်ကို အလျားလိုက်ကူးရသကဲ့သို့ သာရှိမည်ကို သိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Rahul ပြောသကဲ့သို့ ပြန်ပြောရလျင် နည်းပညာနှင့်ပါတ်သက်၍ သင်ယူရာတွင် စိတ်အားထက်သန်ရန် သာ အရေးကြီးပါသည်။
သိချင် တတ်ချင် စိတ်အား ထက်သန်သောကြောင့် မပြတ်လေ့လာ ခြင်းများကသာ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သူ၏ လက်သုံးစကားမှာ " လူတိုင်းနီးပါး ကားမောင်းတတ်ကြတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ကားမပြင်တတ်ကြဘူး။ ကားကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြင်တတ်သူတိုင်းက ကားကိုလည်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မောင်းတတ်ကြတယ်" ။ Henry ကားမောင်းမလား ? ကားပြင်တတ်တဲ့အထိ လေ့လာမလား..?
ယခု အချိန်တွင် အစ်ကိုဟင် Blockchain အကြောင်းဘယ်လောက်သိသလဲ မေးလာလျင် ကျွန်တော့ အဖြေမှာ A , B , C , D စသင်နေပြီဟူ၍သာ။ လက်ရှိ စင်္ကပူ နိုင်ငံတွင် အလုပ်ခေါ်ယူနေသော Blockchain Engineer တို့၏ လစာအား စုံစမ်းကြည့်သောအခါ တလ လျင် SGD 12000$ မှ SGD 15000$ အထိ ပေး၍ ခေါ်ယူနေကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မြန်မာ ငွေဖြင့် တွက်ကြည့် လျင် Blockchain Engineer တို့၏ လစာမှာ တလလျင် သိန်း ၁၂၀ မှ ၁၅၀ အထိ ရှိနေပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့်နည်း ။ ဈေးကွက်တွင် ကျွမ်းကျင်သော Blockchain Engineer တို့ ရှားပါးနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ Blockchain နည်းပညာသည် ယခုမှ အစ ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ကျော်လာသည်နှင့် ဤ နည်းပညာနှင့် ပါတ်သက်သော လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတို့ ဝင်ငွေကောင်းလာကြမည်မှာ မလွဲမသွေပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဤ Blockchain အကြောင်းအရာနှင့်ပါတ်သက်၍ မိမိ အထက်တန်းကျောင်းတက်နေစဉ်က စားမကြိုးစားခဲ့သည်အား ပထမဆုံး အကြိမ် နောင်တရမိပါသည်။ သို့သော် ကျည်ပွေ့အတက်ပေါက်သည်ဟုပင်ပြောပြော ၊ ငွေတမတ်နှင့် ငါးကြင်းခေါင်းတက်ကိုင်သည် ဟုပင်ဆိုဆို ကျွန်တော့ အနေဖြင့် ဤ blockchain မြစ်အား အလျားလိုက် ကူးရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
myanmar blockchain knowledge palnet
3개월 전 by kachinhenry66
myanmarkoko55 · 3개월 전
Blockchain နည်းပညာကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားပြီ။
kachinhenry66 · 3개월 전
golden.future62 · 3개월 전
Blickchain ကားမောင်းတတ်အောင်တော့ ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်မျှဝေ သင်ပေးပါဦးဗျို့
အဲဒီတခုကိုပဲ လေ့လာရင်တောင် တတ်ကျွမ်းနားလည်ဖို့ အတွက် ၂ နှစ်လောက် အချိန်ပေးရမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတယ်။
sheinthu57 · 3개월 전
အင်မတန်မှ ကောင်းမွန်တဲ့ သင်ယူခြင်းပါကိုဟင်
ကိုဟင်တို့လို လူမျိူးတွေထဲမှာရောက်သွားတဲ့အသိတစ်လုံးဟာ ကျနော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် သိပ်ပီးအထောက်အကူဖြစ်လှပါတယ်။
လာမယ့်ခေတ်နှင့်ရှေ့ပြေးနည်းပညာများဟာ ယခုအချိန်မှာ တာဆူနေကြပီဖြစ်နေလို့ နောက်ထပ်ဘယ်လိုပုံတွေနဲ့ အနာဂတ်မှာ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတွေလည်း စောင့်ကြည့်နေမိပါ့အကိုရေ…
စတီးမစ်ကြီးလည်း ဈေးတွေဘယ်လောက်ကျကျ ဆက်လက်ချီတက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းက သူတို့အနေနဲ့ အသေအချာရှိခဲ့တာတော့ဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်တွေတော့ နည်းပညာမအကြောင်းမသိတော့…ဘယ်လိုမသိ
ထင်ပါတယ်ဗျာ…ဘာနဲ့တူလည်းဆို ခုက ကိုယ်တွေဟာ အညာမှာမိုးရွာတာ မမြင်ရပေမယ့် လက်ရှိမြစ်ရေကြီးနေတာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သာ ကျေနပ်နေရတဲ့ဘဝနဲ့လည်း ခပ်ဆင်ဆင်ပ
ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လိုပြောရမလဲ... အနာဂါတ်အတွက် အပြောင်းအလည်း တခု ဖြစ်စေဖို့ လေ့လာနေတာပါ ကိုရှိန်းသူ။
htwegyi61 · 3개월 전
Blockchain တွေ တိုးတက်လာမှာတော့အမှန်ပဲ
မရ ရအောင်ကို ဖြတ်မှာ.... Internet လည်း ရှိတယ် , computer လည်း သုံးတတ် ရဲ့သားနဲ့ အဲဒီ နည်းပညာမှ မရ ရင် ကိုဟင် ညံ့လို့ပဲ။